साहित्यकार सुवेदीलाई ‘प्रतिभा पुरस्कार’ र समाजसेवी राईलाई ‘नागरिक सम्मान’ - Hamrokhotang
Home खोटाङ समाचार साहित्यकार सुवेदीलाई ‘प्रतिभा पुरस्कार’ र समाजसेवी राईलाई ‘नागरिक सम्मान’
साहित्यकार सुवेदीलाई ‘प्रतिभा पुरस्कार’ र समाजसेवी राईलाई ‘नागरिक सम्मान’
२०७६ पुष ५, शनिबार १३:२७
खोटाङ पुष–५, खोटाङमा जन्मिएर वेलायतलाई कर्मभूमि वनाउने खोटाङेहरुको सामाजिक संस्था खोटाङ सेवा समाज यूकेले जिल्लाका दुई व्यक्तिलाई पुरस्कृत र सम्मान गरेको छ । यूकेमा रहेर जिल्लाको सेवामा समर्पित समाजले साहित्यकार तथा सहप्राध्यापक डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई खोटाङ प्रतिभा पुरस्कार २०१८ ले पुरस्कृत गरेको हो ।
यस्तै, समाजले शिक्षा तथा समाजसेवामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको भन्दै शिक्षासेवी तथा समाजसेवी जयकुमार राईलाई ‘खोटाङ नागरिक सम्मान २०१८’ ले सम्मान गरेको छ । शनिबार काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको हलमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच समाजले सो सम्मान तथा पुरस्कार समर्पण गरेको हो ।
समाजले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने प्रतिभा पुरस्कारको राशी २५ हजार रुपैंयाँ र नागारिक सम्मान सहितको पुरस्कारको राशी नगद ५० हजार रुपैंयाँ रहेको छ ।
पुरस्कृत स्रष्टा सुवेदी प्राध्यापनको शिलशिलामा चीनमा रहेकोले सो पुरस्कार उहाँकी श्रीमति डा. यादेवी ढकालले ग्रहण गर्नुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरेले दोसल्ला, प्रमाणपत्र र नगदसहित सम्मान अर्पण गर्नुभएको हो ।
सम्मान ग्रहण गरेपछि चीनबाट सम्मानीत स्रष्टा डा. सुवेदीले पठाएको धन्यवाद सन्देश डा. ढकालले पढेर सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सम्मानीत स्रष्टाहरु जयकुमार राईको परिचय डा. विष्णु राई र डा. धनप्रसाद सुवेदीको परिचय टंक भट्टराईले गराएको सम्मान तथा पुरस्कार कोषका संयोजक जगत नवोदितले जनाउनुभयो ।